China HDPE orinasa mpanamboatra fantsom-pifandraisana | Shengyang
◎ Fanoherana ny harafesina sy androm-piainana maharitra
Any amin'ny morontsiraka dia avo ny haavon'ny rano ambanin'ny tany ary mando ny tany. Ny fampiasana vy na fantsona hafa dia tsy maintsy anticorrosive, ary ny androm-piainana dia 30 taona monja. Ny fantsona PE dia mahazaka haino aman-jery simika isan-karazany, ary tsy voakasiky ny fahasimban'ny tany.
◎ Tsara sy henjana
Ny fantsom-pahefana PE dia fantsom-panafihana avo lenta misy elongation izay mihoatra ny 500%. Ny fahaizana mampifanaraka amin'ny fanorenan-tany sy ny fifindran-tany tsy dia mitovy dia matanjaka tokoa. Fanoherana tohina tsara. Ny fantson-kalibre kely dia azo atondrahana malalaka.
◎ Milamina ny rindrin'ny fantsona, kely ny coefficient an'ny friksi, mora alefa ny tariby, avo ny fahombiazan'ny fananganana, ary ambany ny vidin'ny fananganana.
◎ Fahombiazan'ny insulation elektrika tsara, androm-panompoana maharitra (mihoatra ny 50 taona ho an'ny fantsom-pifandraisana ambanin'ny tany), fiasa maharitra sy azo antoka ary azo antoka.
◎ Milanja maivana, fikojakojana, fametrahana ary fananganana, fikojakojana mety, fitaterana mora sy fandidiana
◎ Ny fantson-kalibre kely dia azo ahodina, miaraka amina faritra fantsona lava, vitsy ny tonona ary mora ny mametraka azy
◎ Ny fantsona dia azo atao amin'ny loko maro hanehoana ny fahasamihafana
◎ Fanoherana ny fihenan'ny maripana ambany tsara
Ny mari-pana ambany-haben'ny hafanan'ny PE dia ambany dia ambany, ary azo ampiasaina soa aman-tsara amin'ny elanelan'ny 20-60C. Mandritra ny fananganana amin'ny ririnina dia tsy ho malemy ny fantsona noho ny fiantraikan'ny fitaovana.
◎Fanoherana ny abrasion tsara. Raha ampitahaina amin'ny fantsom-by vy hafa, ny fantsom-pandrefesana PE dia manana fanoherana maharitra 4 heny noho ny fantsom-by
◎ Mora mifandray, afaka mampiasa fomba fanamboarana vaovao isan-karazany
Ho fanampin'ireo fomba fitrandrahana nentim-paharazana ho an'ny fantsom-panafody PE dia azo ampiasaina ihany koa ny karazana teknolojia tsy fitrandrahana vaovao, toy ny fantsom-pipa, fantsom-pitrandrahana, fantsona vaky, sns. Io ihany no toerana tsy avela hisafidianana fihadiana.
Manaraka: Paompy mitambatra polyethylene mitambatra vy ho an'ny famatsian-drano
Klorida polyvinyl novaina nohamafisina (MPVC-SR ...